« Raharaha kidnapping » – Toamasina : lavon’ny balan’ny polisy i Fredo iray amin’ireo mpaka an-keriny | NewsMada
« Raharaha kidnapping » – Toamasina : lavon’ny balan’ny polisy i Fredo iray amin’ireo mpaka an-keriny
Taorian’ny fifanenjehana sy fifampitifirana henjana, nandritra ny 20 minitra teo ho eo, tao amin’ny fokontany Tanambao faha-V, afakomaly alina, lavo rotiky ny balan’ny polisy avy ao amin’ny Brigade criminelle avy aty Antananarivo sy ny polisy tany an-toerana i Fredo, iray amin’ireo tena rain-dahiny tafiditra amin’ity raharaha kidnapping tany Toamasina ity.
Ity farany izay anisan’ireo jiolahy karohina tamin’ny fakana an-keriny an’i Arnaud sy Annie. Anisan’ireo nambaran’ny polisy fa jiolahy tokony mamita sazy any Tsiafahy izy ity. Lavon’ny balan’ny polisy avy amin’ny borigady misahana ny ady heloka bevava Antananarivo sy ny polisy avy any Toamasina ity jiolahy voalaza fa mpanao kidnapping ity.
Raha ny loharanom-baovao, efa hatramin’ny 12 ora antoandro, nisy nahatsikaritra ity jiolahy ity, ny alarobia tany an-toerana. Voalaza fa nifindra niafina tao amin’ny sakaizany mipetraka amin’ ny fokontany 13/81 Tanambao V izy io. Olona tsara sitrapo kosa no nilaza ny loharanom-baovao ny polisy.
Tsy niandry ela, noho izany, fa nametraka vela-pandrika sy paik’ ady hisamborana ity jiolahy raindahiny ity hatramin’ny 5 ora hariva ny polisy. Efa tamin’ny 10 ora alina vao nody tao an-tranon’ny sakaizany i Freddo. Tsikariny ihany anefa ny fisian’ny polisy miandry azy ka nandositra avy hatrany izy, ka raikitra teo ny tifitra variraraka. Nifanenjehana io alin’ny alarobia io ity jiolahy ary tsy namelan’ny polisy raha tsy maty. Voalaza fa nitifitra ihany koa ity farany sady nitsoaka, ka izao ny niafarany.
Voalaza fa efa voatifitra
Tamin’izao fahafatesan’i Freddo izao, voalaza fa tokony hisy diam-bala amin’ny tongotr’izy io satria efa nisy ny fanambarana ny alin’ny 24 desambra fa voatifitra teo amin’ny tongony i Freddo, saingy tafatsoaka ihany. Tsy nahitana diam-bala tamin’ny
tongotry ny lehilahy. Diso, araka izany, ny nambaran’ny sasany fa efa voatifitra izy ity talohan’izao.
Ity izany ny jiolahy faharoa tafiditra amin’ny raharaha fakana an-keriny an’ i Annie sy Arnaud lavon’ny polisy. Ireto farany izay efa namoaka vava fa tsy hitsitsy manoloana ireo olona tokony hamita sazy any am-ponja, kanefa mbola sahy manao asa ratsy hatrany, indrindra fa amin’ ity resaka fakana an-keriny ity.
Amin’ ireo olona enina namoahan’ny fitsarana didy fampisamborana, i Freddo no maty ary mbola karohina kosa ry Lejao, Ramika, Tidakely, raha voalaza fa ao amin’ny fonjaben’ i Tsiafahy kosa i Freddy. Amin’ izay resaka fahafatesana izay ihany, mbola tsy nisy fianakaviana naka ny razan-dRakoto Leonce, any amin’ny tranom-patin’ny Hopitalibe, izay lavon’ny balan’ny polisy ny alatsinainy teo nandritra ny fanavotana an’ i Arnaud. Tsikaritra ho toy ny misy lonilony amin’ireo mpitandro filaminana noho ny fisian’ireo gadra mivoaka mandehandeha, ary izao manao asan-jiolahy izao. Nametra-panontaniana mihitsy ny talem-paritry ny polisy fa ny gadra ve, afaka mifampiantso amin’ny olona ivelan’ny fonja? Voaporofo ihany koa izao fa anisan’ny tokony hamita sazy any am-ponja i Freddo ity, kanefa izao tratra tamin’ny asan-jiolahy izao.
Une réponse à "« Raharaha kidnapping » – Toamasina : lavon’ny balan’ny polisy i Fredo iray amin’ireo mpaka an-keriny"
Botabota 15/01/2016 à 13:13
Fotoana angamba izao handraisan’ny Zandary sy ny Polisim-pirenena andraikitra @ fanaovana fanadihadihana lalina momba itony gadra tokony hanefa ny saziny nefa mbola indro hita miriaria manao sy manohy ny asa ratsiny eto ivelan’ny fonja, tokony hisy fanadihadihana lalina hatrany @ ireo talen’ny fonja sy ny mpiandry fonja fa matoa olona tokony higadra eny Tsiafahy kanefa miriaria any Toamasina dia tena paika efa voapetrapetraka tsara daholo izany, satria tsy nisy mihitsy haino aman-jery nahitana angamba fa tafatsoaka ny fonja i Fredo, tsy nisy koa mba valan-dresaka natao hilazana izany, mba ho hita koa @ izay hoe iza no tena mpamoaka ireny olona ireny, teny midina avy any @ mpitsara ve sa lalao maloto mety miainga avy ao @ fitantanana ny fonja, fa tsy tongatonga ho azy izany, ny zavatra toy izao no ohatran’ny mitarika ny tena hanome ny rariny an’ilay talem-paritrin’ny polisim-pirenena any Antsiranana izay nilaza fa hotifiriko daholo ireny olona migadra kanefa mbola hita mandehandeha eny an-tanana ireny, ary tokony hisy h@ fitsikilovana ny zava-misy eny @ ireny fonja ireny, sao misy mamoaka @ alina ireny olon-dratsy ireny hanatontosa ny asa ratsiny, dia miverina maraina ka mahatonga indraindray ny fikarohana ho tsy ahitam-baliny sy mandamoaka hatrany!